'के कारणले संसद् विघटन गरेको हो ? अब के ठीक हो सर्वोच्चले फैसला गर्छ':-सुवास नेम्वाङ – Samacharpati Samacharpati 'के कारणले संसद् विघटन गरेको हो ? अब के ठीक हो सर्वोच्चले फैसला गर्छ':-सुवास नेम्वाङ – Samacharpati
काठमाडौं, ४ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अहिले नबोल्ने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउनुभएको छ ।
संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नरहेको विषयमा नेम्वाङले बोलेको भिडियो भाइरल भइरहेका बेला उहाँले सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन विषयमा अहिले नबोल्ने बताउनुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा अहिले आधिकारिकताको विषयमाथि छलफल भइरहेको बताउँदै छिट्टै अहिलेको विवादको टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि अहिलेको सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढ्न पाउने संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताउँदै नेम्वाङले भन्नुभयो– ‘अर्को सरकार नबान्दासम्म यही मन्त्रिपरिषद्ले नै सबै निर्णय गर्न पाउँछ, काम चलाउको प्रश्न संविधानमा उठाइएको छैन, मैले बुझेको छैन, म अलिअलि लाटो लाटो छु ।’
‘विश्वकै अनुभव लिएर नेपालमा संविधान निर्माण गयौं, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि खुब माया गरेर मैले बोलेको भिडियो भाइरल बनाइदिनुभएछ, मैले बोलेको कुराहरु त्यो भिडियोमा छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले बोलेका कुरा राखिएका छन् । तर अहिले प्रसंग अर्को छ । प्रश्नहरु अदालतमा विचाराधीन छन्, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बोल्छु, म मौन होइन । सर्वोच्च अदालतले चाँडै निर्णय गर्ला ।’